राइजिंग सन पिक्चर्स 'थॉमस माहरले युवा कलाकारहरूलाई आफ्नो इच्छालाई क्यारियरमा बदल्न मद्दत गर्दछ - एनएबी शो समाचार प्रसारण बीट, एनएबी कार्यक्रमको आधिकारिक प्रसारणकर्ता द्वारा प्रकाशित - एनएबी शो लाइभ
घर » समाचार » राइजिंग सन पिक्चर्स 'थॉमस माहरले युवा कलाकारहरूलाई आफ्नो उत्कटतालाई क्यारियरमा बदल्न मद्दत गर्दछ
राइजिंग सन पिक्चर्स 'थॉमस माहरले युवा कलाकारहरूलाई आफ्नो उत्कटतालाई क्यारियरमा बदल्न मद्दत गर्दछ
स्कूलको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम आफैंमा पढिसकेपछि माहेरले कक्षाकोठामा एक विशेष ब्रान्डको उत्साह ल्याउँदछ।
एडिलेड, दक्षिण अष्ट्रेलिया — थॉमस माहर राइजिंग सन पिक्चर्स एजुकेशनमा शिक्षण स्टाफको सबैभन्दा कान्छो सदस्य हुन्। राइजिंग सन पिक्चर्स (आरएसपी) र दक्षिण अस्ट्रेलिया युनिवर्सिटी (युनिसा) को संयोजनमा वितरण गरिएको एडीलेड मूल निवासी स्वयं प्रोग्रामको पूर्व छात्र हो। एक्सएनयूएमएक्समा गतिशील प्रभाव र लाइटिंगमा स्नातक प्रमाणपत्र पूरा गरेपछि। एडिलेड VFX शप रालमा एक कलाकारको रूपमा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त गरिसकेपछि, र TAFE मा हौडिनी र नुके आधारभूत कुराहरू सिकाई, टम गत बर्ष RSP मा फर्किए। त्यस बेलादेखि, उनले डाइनामिक प्रभाव र प्रकाशको ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स र कम्पोजि,, पेन्ट र रोटो र अन्य विषयहरूमा सह-सिकाइएको वर्गमा डान विल्सको शिक्षण सहायकको रूपमा सेवा प्रदान गरिसकेका छन। उनले ब्लकबस्टर हिट सहित धेरै फिल्महरूमा स्टुडियोमा एक कलाकारको रूपमा पनि काम गरेका छन् कप्तान मार्वल.
टम विद्यार्थीहरु बीच हौडिनी को ज्ञान को लागी लोकप्रिय साबित भएको छ, गाह्रो अवधारणाहरु लाई सरल लाग्न को लागी दस्तक दिनुहुन्छ, र उत्साह उनी कक्षा कोठामा ल्याउँछन्। उनी, बारीमा, उनले कक्षाकोठामा भेटेको महत्वाकांक्षी कलाकारहरू द्वारा अचम्मित भएका छन्। "मैले चार भन्दा बढी छुट्टै कक्षामा काम गरें र लगभग सबै विद्यार्थीले मेरो अपेक्षाहरू भन्दा बढि छ," उनी भन्छन्। “उनीहरूले लगातार उनीहरूको प्राविधिक योग्यता र कलात्मकता र मलाई सिकाउने कुरा सिक्न र लागू गर्न सक्षम हुने गतिले मलाई लगातार प्रभावित गर्छन्। तिनीहरू अविश्वसनीय मैत्री, परिपक्व र सक्षम छन्। ”
उनका धेरै विद्यार्थीहरू जस्तै टम पनि युवावस्थामा चलचित्रहरू हेर्दा दृश्य प्रभावहरूमा मोहित भए। उनले हाईस्कूलमा छोटो फिल्महरू बनाए र एडिलेड विश्वविद्यालय र टेफे SA मा औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त गरे, अन्ततः स्क्रिन र मिडियामा उन्नत डिप्लोमा कमाए।
TAFE मा अझै पनि एक विद्यार्थी हुँदा, टमले RSP मा Houdini सिक्ने दुई छोटो पाठ्यक्रमहरू गरे। उनले अनुभवलाई यति रमाए कि उनले आफ्नो स्नातक पछि ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राममा भर्ना गरे। उनले डाईनामिक इफेक्ट र प्रकाशको कोर्सको माध्यमबाट हौडिनी मास्टर गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने छनौट गरे र उनले अनुभव एक खेल परिवर्तकको रूपमा वर्णन गरे। यसले उसलाई आफ्नो सीपहरुलाई नयाँ तहमा पुर्‍याउन मद्दत मात्र गर्यो तर यसले उसको उत्कटतालाई मूर्त, जीवनभर क्यारियरमा कसरी बदल्ने भनेर सिकायो।
"यो राम्रो थियो," उनी भन्छन्। “म हिंडेको क्षणदेखि नै मैले महसुस गरें कि म एक विद्यार्थी मात्र होइन तर टोलीको सदस्य हुँ। स्टाफले कडा परिश्रम गरे हामीलाई स्वागत गर्नका लागि। भुईबाट कलाकारहरू, जो शिक्षा कर्मचारीको भाग थिएनन्, ड्रप गरेर हाम्रो काममा सहयोग र प्रतिक्रिया प्रस्ताव गर्छन्। यो गहन, पूर्ण-समय, हप्ताको पाँच दिन थियो। दिनचर्यामा रहनु रमाईलो भयो जहाँ तपाई साँच्चिकै गति निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। "
ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम पूरा गरेपछि, टोमले रिलहरू र रेजुमेहरू पठाउँदै र कामका लागि अन्तर्वार्ता लिएको केही महिना खर्च गरे, त्यस भन्दा पहिले एक मित्रले उनलाई रालमा जुनियर कलाकारको पदको लागि सिफारिस गर्‍यो। उनको भूमिकामा मुख्य रूपले कम्पोजि and र रोटोस्कोपिंग संलग्न थियो, तर उनले नेटफ्लिक्स श्रृंखलाको लागि पानी प्रभाव सिर्जना गर्ने आफ्नो हौडिनी सीपहरू प्रयोग गर्ने अवसर पनि पाएका थिए। Tidelands.
रेजिनमा शुरू भएको केही समय पछि, टोमलाई दोस्रो जागिरको प्रस्ताव दिइयो, आफ्नो पहिलेको स्कूल, टाफेमा हौडिनीलाई सिकाउँदै। उनले कलाकारको भुइँमा काम गरेको जस्तो रमाईलो अनुभव पाए। तिनी भन्छिन्‌, “मलाई सधैं सिकाउने विचार मन पर्थ्यो। "यो कडा मेहनत थियो, तर मलाई यो मन पर्यो, विशेष गरी यसमा मेरो रुचिको मुख्य बिन्दु हौदिनी संलग्न भएको।"
गत बर्षको मध्यमा, एक शिक्षण सहायक स्थिति आरएसपीमा खोलियो। कार्यक्रम प्रबन्ध गर्ने अन्ना होजले टमको बारेमा सोचेकी थिइन्, जसलाई उनी आरएसपीमा र टाफेमा उनको समयदेखि नै थाँहा थिइन्। ऊ फर्कने मौकामा उफ्रियो। "म जस्तो थियो, 'हो!'" उनी भन्छन्। "RSP मा फर्किनु र डेस्कको अर्कोपट्टि हुन पाउनु आश्चर्यजनक थियो।"
यो अचम्मको कुरा होइन कि टम आफ्ना विद्यार्थीहरूसँग राम्रो भई सकेको छ। उहाँ आफ्नो कक्षाकोठामा अधिकांश युवा कलाकारहरू भन्दा धेरै उमेरको हुनुहुन्न र हालसालै कार्यक्रमको माध्यमबाट जानुहुँदा उनीहरूको संघर्ष र विजयसँग पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ। "मैले पहिलो काम शुरू गरेको र विद्यार्थीबाट पेशेवर कलाकार र शिक्षकमा परिवर्तन भएको दुई वर्ष भएको छ," उनी भन्छन। "उद्योग को परिदृश्य धेरै परिवर्तन भएको छैन। जब तपाईं अनुप्रयोगहरू पठाउनुहुन्छ, तपाईं जहिले पनि सुन्नुहुन्न। यो निरुत्साहजनक हुन सक्छ, तर तपाईंले भर्खरै आफ्नो सीपहरू सुधार गर्न जारी राख्नु भयो र फेरि आवेदन दिनुहोस्। त्यो त्यस्तो चीज हो जुन मैले कठिन तरिकाले सिके र त्यसैले म मेरा विद्यार्थीहरूलाई धैर्य र स्थिर रहन सल्लाह दिन्छु। म पनि उनीहरुलाई आरएसपीले प्रस्ताव गरेको सबै रोजगार संसाधनको फाइदा लिन प्रोत्साहित गर्दछु। "
यसलाई टाँस्न बाहेक, टम आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको फ्यूचरको बारेमा लामो र कडा सोच्न सल्लाह दिन्छन्। "सोच्नुहोस् कि VFX भित्र कस्तो भूमिका खेल्न चाहानुहुन्छ," उनी जोड दिन्छन्। "सुरुमा, तिनीहरू सबै केही हदसम्म समान देखिएला, तर तिनीहरू धेरै फरक क्यारियर पथमा नेतृत्व गर्दछन्। यदि तपाइँ अन्ततः एक कम्पोजिटर बन्न मा तपाइँको मुटु सेट छ, उदाहरण को लागी, जुन जुन जुन भूमिका खेल्ने को लागी पत्ता लगाउनुहोस्, र paint र रोटो जस्तै, र ती सीप विकास गर्न को लागी काम। यदि तपाईं कहाँ समाप्त हुन चाहानुहुन्छ भनेर अनिश्चित हुनुहुन्छ भने केही चीजको साथ आधारभूत पाठ्यक्रम लिनुहोस्, वा घरमै के सिक्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईंले सायद एकदमै छिटो सिक्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई मनपर्दैन र जहाँ तपाईंको उत्कटता हो। तपाईंसँग पेशेवरहरूको बारेमा केहि पनि राम्रो विचार छ र अधिक उन्नत कामको लागि उत्तम तयार हुन सक्नुहुन्छ।
"यदि तपाईसँग भिजुअल प्रभावको लागि जुनसुकै इच्छा छ, म गरेझैं तपाईले यसको लागि जानु पर्छ। एडिलेड र विश्वभर भिजुअल इफेक्ट कलाकार हुन उत्तम समय पहिला कहिल्यै आएको थिएन। ”
एडोटेट एरोरा स्वास्थ्य अभियान / कोलोरी प्रसारण - सोशल मिडिया प्रसारण - सोशल मिडिया शिक्षा ग्यामर चापमैनलाई सम्मानित कोलोनी / शिकागो प्रशिक्षण TVU नेटवर्क VFX दृश्य प्रभाव	2019-10-08
अघिल्लो: लाइफ चर्चले VITEC घरहरू पूजा स्ट्रिमि Sol समाधानहरूको छनौट गर्दछ
अर्को: इंटर्न, उत्पादन # 514-20